वाणिज्य बैंकले प्रत्येक त्रैमासमा आफ्नै कार्ययोजनाको समीक्षा पेश गर्नुपर्ने Bizshala -
वाणिज्य बैंकले प्रत्येक त्रैमासमा आफ्नै कार्ययोजनाको समीक्षा पेश गर्नुपर्ने
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुले अब प्रत्येक त्रैमासमा आफूले केन्द्रीय बैंकमा पेश गरेको वार्षिक कार्ययोजनाको समीक्षा समेत पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले एक खालको वार्षिक कार्ययोजना बनाई अस्वभाविक लक्ष्य हासिल गर्ने काम बैंकहरुले गर्न थालेपछि त्यसमा कडाई गर्न यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मौद्रिक नीति घोषणा गर्दै गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना संचालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यस्तो कार्ययोजनाको संचालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गरी यस बैंकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने घोषणा गरेका हुन् ।
अब बैंकहरुले वार्षिक कार्ययोजनासँगै प्रत्येक त्रैमासमा त्यसको समीक्षासहितको कार्ययोजना पेश गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यसले अनियन्त्रित दौडमा समाहित भई अस्वभाविक नाफा कमाउन चाहने बैंकहरु नियमनमा आउनेछन् ।
काठमाण्डौ । कोभिड १९ का कारण लगानीका क्षेत्र खुम्चिँदै गइरहेको...
नवील बैंकमा ७.९९% मै घरकर्जा पाइने, न्यून ब्याजदरका अन्य तीन
काठमाण्डौ । प्रणालीमा तरलता थुप्रिएर निक्षेपको ब्याज धमाधम...
एनआईसी एशिया बैंकको खातामा नगद जम्मा गर्न अब अनलाईनबाटै भौचर
काठमाण्डौ । एनआईसी एशिया बैंकले देशको बैंकिङ्ग इतिहासमै पहिलो पटक...
ग्लोबल आईएमई बैंकले घटायो ब्याजदर, ऋणको कति पुग्यो ?
काठमाण्डौ । ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडले बुधबार निक्षेपको ब्याजदर...
भोलिदेखि विद्युतीय र अन्तरबैंक एटीएम कारोबार गर्दा शुल्क
काठमाण्डौ । कोभिड १९ का कारण निःशुल्क गरिएका विद्युतीय कारोबारमा...
काठमाण्डौको नरेफाँटमा सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा
काठमाण्डौ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले आज बुधबार काठमाण्डौको...
आइएमईमार्फत पैसा पठाउँदा बैंक खातामा तत्कालै जम्मा हुने
काठमाण्डौ । सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आइएमईमार्फत...
काठमाण्डौ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत...